Igbe ndochi okirikiri okomoko nke igbe eji etinye uzo ma obu ihe eji eme ya.
Igbe okpokoro Okomoko okomoko
Model Number: GB201807-007
Igbe Fancy Fancy nke eji ọla edo na-emezi ya
Akwukwo nke ndi okacha edobere nke rose
Igbe Nkwakọ ngwaahịa Ifuru
Flowershụnanya okooko osisi? Kechie ha n'ime igbe ifuru a mara mma nke ji ọla edo kpuchie ya iji mee ka ha maa mma na ịma mma. Akwukwo a na-acha uhie uhie nke okirikiri a na-acha uhie uhie maka ọmarịcha mara mma dị ka ifuru ọ bụla ị họọrọ iji tinye n'ime igbe a Otuto a mara mma nke ifuru na onyinye ị na-ele ga-eyi eze mgbe enyere gị aka n'ime igbe a. Can nwere ike iji igbe nkwakọba ifuru a mara mma maka ememme ọ bụla. Ma obu oriri agbamakwụkwọ ma obu izukọta ọnụ, ị ga-enwe ọ enjoyụ n'ụdị ya. Etu zuru oke nke usoro eze na ịkọ nkọ. Ọ bụrụ na ọ bụ maka ịingụrị ọrushụ nke ochie gị ma ọ bụ yikwasị nwunye gị na ncheta alụmdi na nwunye gị, ghaa okooko osisi onye ị hụrụ n'anya nwere mmasị na ya ma mee ụbọchị ahụ n'ụzọ nke gị.
Akwukwo ifuru nke eji eme ya mma nke eji edo edo edo edo edo dika acha anụnụ anụnụ karịrị mmachi anya maka anya. Jiri ya AURA mee ka ị hụ onye ị hụrụ n'anya n'anya.
Ifuru nwere ike inyere gị aka imeri obi, ọkachasị mgbe ị nwere onyinye dị n’ime igbe ifuru ifuru na ọla edo iji mee mkpịsị ọla edo. Can gaghị enwe ike ịga n'ụzọ na-ezighi ezi na ifuru onye ị hụrụ n'anya n'anya site na iji ya jiri igbe nkwakọ ngwaahịa ziri ezi. Ejiri igbe igbe eme nke chipboard nke di elu ma na-enye anya di egwu. Ọ na-adigide ma ga-ejigide ogologo. Ọ dị mfe iji aka. Ihe niile ị ga - eme bụ imejuputa okooko osisi dị iche iche nke nhọrọ gị ma mechie mkpuchi. Mee ka oriri ndi ozo toro ifuru dika ifuru. Onyinye zuru oke maka oge obula.